Ukubuyekezwa kwe-Voicemod Pro - Ingabe Lokhu Kuphephile Ukuyisebenzisa? - Buyekeza
Izinhlelo zokusebenza ezishintsha izwi bezilokhu ziheha abantu ukuthi bazizame. Impela, kungubuciko bokukhohlisa, kepha abantu bayisebenzisela ukuzijabulisa isikhathi esiningi. Kuvamile ikakhulukazi embonini yokudlala ukuthi abantu bashintshe amazwi abo. Abanye baze bathande ukuzenza ilungu lobulili obuhlukile ukuze bazijabulise.
Phakathi kwalaba abashintsha izwi, iVoicemod iyipulatifomu eyingqayizivele evelele. Ngomshini wayo womsindo we-meme kanye nenqolobane yezici ezihehayo, ithola ukuthandwa impela. Yini eyenza kube ukhetho olunamandla kangaka? Ingabe kufanelekile ukuthola i-Voicemod yohlelo lwakho? Uma unemibuzo efana nale, uzoba nazo zonke izimpendulo zakho kulesi sibuyekezo.
Okubaluleke kakhulu, kunenkinga ekhulayo nombuzo ophathelene nokuphepha nobuqiniso besikhulumi, ngakho-ke uzofunda nangalokho.
Yini i-Voicemod Pro?
Ikuvumela ukuthi ushintshe umsindo wezwi lakho, noma wenze ama-tweaks amancane. Kukhona ngisho nenketho ye-auto-tuner etholakalayo. Uma ufuna ukuzijabulisa ku-intanethi futhi uhlekise nxazonke, kuyisinqumo esihle. Okubaluleke kakhulu, i-Voicemod isebenza nedivayisi yakho yokufaka yomsindo ngaphandle kwezinkinga zokuhlanekezelwa nokuhambisana. Azikho izinguquko eziningi zamahhala ezitholakalela abasebenzisi. Kulezi zici, iVoicemod Pro ivelele.
Izici ze-Voicemod Pro:
Isixhumi esibonakalayo somsebenzisi -
Ngokungafani nabanye abaningi abashintsha izwi abane-interface yesikole esidala, i-Voicemod isebenza ekunikezeni isikhombimsebenzisi esibonakalayo. Inokubukeka kwesimanje okuhambisana nokuheha kobuchwepheshe besimanje. Ngakho-ke, akuzwa sengathi usebenzisa uhlelo lwezwi oludala noma oluphelelwe yisikhathi. Inomphumela ongokwengqondo njengoba uthambekele ekusebenziseni ipulatifomu.
Ngokuhambisanayo, isikhombimsebenzisi esibushelelezi futhi sihle kakhulu ekusebenziseni. Iqonde ngqo ngokulula ukuhlola imenyu nemisebenzi. Izilungiselelo zifinyeleleka kalula, futhi noma ngabe ufuna ukudala amazwi wangokwezifiso, ungakwenza kahle. Okubaluleke nakakhulu, ungabona ukuhlanganiswa okuphelele kwamazwi ngqo ohlwini lwamagama. Akunasidingo sokuthi uwasethe noma ulandele inqubo eyinkimbinkimbi. Vele uchofoze kuzwi olifunayo, futhi lizosebenza.
Ukuhambisana kwe-Voicemod -
Yize iyipulatifomu yokushintsha izwi ezisebenziseka kalula, iVoicemod ibamba ukungahambelani endaweni ethile. Ayitholakali kwiziduduzi zemidlalo, futhi ayikho inguqulo ye-Android nayo. Ngenkathi itholakala ku-iPhone, ayikho inguqulo ye-MacOS. Noma kunjalo, i-Voicemod isekela ngokuphelele iWindows 7 enguqulweni yakamuva. Ngakho-ke, kuyisinqumo esihle kubadlali be-PC.
Uma ubheka ukwedlula lokho, khona-ke kusebenza ngamapulatifomu amaningi ajwayelekile njengeDiscord, Twitch, Teamspeaker, nokunye okuningi. Inokuhlukahluka okuningi kulezi zici. Onjiniyela njengamanje basebenzela ukukhipha inguqulo ehambisana kakhulu namanye amapulatifomu. Uze uthole isandiso sesiphequluli sewebhu se-Chrome.
Ngaphezu kwalokho, kunoma imuphi umuntu othanda ukusakazwa noma othanda ukudlala, i-Elgato Stream Deck ingeza lula okuthe xaxa. IVoicemod isebenza nalokho ukukulethela ukusetshenziswa okulula. Ungabela futhi ama-hotkeys kuVoicemod ukushintsha kalula amaphimbo abonakala kakhulu ku-CS: GO kanye ne-interface yayo ye-SLAM.
Isikhangiso, i-Spyware nezinye izici zokuphepha -
Mhlawumbe isici esiteleka kakhulu seVoicemod ukungabi khona kwezikhangiso noma ukuphazamiseka komuntu wesithathu. Akudingeki ukhathazeke ngezikhangiso ezinomthunzi. Ngokungafani nezinye izinsizakalo zamahhala, ayisebenzisi imodyuli ye-freemium. Ngakho-ke, uthola isikhombimsebenzisi esihlanzekile esingaphazamisi ukusebenza kohlelo lwakho futhi.
Akudingeki ukhathazeke nge-malware, i-spyware, nezinye izinkinga ezifanayo, noma. Okubaluleke kakhulu, i-Voicemod ayenzi ushintsho kufayela lomsebenzisi noma ifinyelele kumafayela wakho uqobo. Abantu abaningi bayazi ngefayela le-'PUP 'i-Voicemod ecela imvume yalo. Ungavumela ngokuphepha imvume njengoba ingalimazi isistimu yakho. Kukonke, imodi yezwi ishintsha izwi eliphephe ngokuphelele.
Ukudalwa kwe-Soundboard -
Ungangeza izingoma, izingoma zetimu, noma imisindo oyithandayo ku-Voicemod futhi uyinikeze ama-hotkey athile. Ngaleyo ndlela, ungawudlala umsindo ngenkathi uxoxa noma udlala umdlalo. Kukhulisa ukukhanga kwegeyimu, ikakhulukazi kwabanye. Ungasebenzisa amanothi amaningi wezwi, izingxoxo, noma umculo, ikakhulukazi lawo avela kumalungu. Ngakho-ke, ingeza ekukhangeni okuphelele kweVoicemod.
Unomsizi wezwi-kuya-enkulumweni ozosebenza ngamazwi owakhethayo. Kodwa-ke, ayazi kahle njengabahlinzeki bangempela njengombhalo weMicrosoft ukusheshisa. Noma kunjalo, kuyinto ozozijabulisa ngayo, ukuzijabulisa nokuthi yini.
Inguqulo yamahhala vs Voicemod Pro:
IVoicemod ekuqaleni ikhululekile ukuyisebenzisa futhi ayikuphoqi ukuthi ubhalisele uhlobo lwe-premium, noma. Kodwa-ke, banesikimu sokukhangisa esihlakaniphile esikushiya ufuna okungaphezulu. Ngakho-ke, abantu abaningi bangagcina bethenga i-Voicemod kungekudala noma kamuva.
Nayi ishadi lokuqhathanisa elisheshayo lezinguqulo ezimbili
Ungakhetha phakathi kwamazwi ayisikhombisa ngasikhathi
Amazwi ayisikhombisa awahleliwe futhi abhalwa kabusha isonto ngalinye
Awukwazi ukwenza ngezifiso amazwi
Awukwazi ukuba nezintandokazi
Ayikho indlela yokwakha izwi elisha
Awukwazi ukulayisha noma ukuguqula izingoma zezwi
Ukufinyelela kuzwi elingaphezu kwe-77 nganoma isiphi isikhathi ngaphandle kokuphinda uqalise kabusha noma ukusetha kabusha
Ungangeza izintandokazi bese ukhetha ukusetha ngaphambilini njengokuzilibazisa kwakho
Sebenzisa i-soundboard ukwengeza imiphumela
Enza ngendlela oyifisayo izwi
Ukuzenzela ngokuzenzakalela kuyatholakala
Ingadala izwi elisha
Uma ubheka ishadi lokuqhathanisa, kungahle kubonakale sengathi uhlobo lwamahhala alusizi. Nokho, lokho akulona iqiniso. Ungayisebenzisa isikhathi eside ngendlela othanda ngayo. Le nguqulo yamahhala ikunikeza amazwi amasha ayisikhombisa usuku ngalunye. Inkinga kuphela ukuthi awukwazi ukubasindisa, kepha kuyisinqumo esihle somuntu ofuna ukuzijabulisa okungahleliwe. Uma ungumuntu othanda ukulindela ukungahleliwe okungama-preset ayisikhombisa, inguqulo yamahhala yinhle.
IPrimiyamu ivula izinketho eziningi zokwenza ngokwezifiso nokwenza ngezifiso kubasebenzisi abanokufinyelela kumtapo wezincwadi ophelele osethwe ngaphambili wezwi. Kodwa-ke, kungumtapo wezwi wamazwi angama-77 angahle abe nezisho ezilula ezinemiphumela ehlukile. Ngokuqhathanisa, akuyona leyo nto enkulu yesikhulumi samahhala.
Ekugcineni, kwehla kubhajethi yakho nokuthandayo. Uma ungumuntu omningi ofuna ukwenza ngezifiso amazwi, iya kunguqulo yohlobo. Ngaphandle kwalokho, inguqulo yamahhala iyipulatifomu enhle yokuzijabulisa nezidingo zokushintsha izwi.
Isiphetho - Ingabe i-Voicemod Iphephile?
Kukonke, i-Voicemod ingushintsho lwezwi oluphephe kakhulu kuwe olunezici eziningi ezimnandi. Kunamawebhusayithi amaningi we-clone nabantu abaku-inthanethi abathi bakunikeza inguqulo yamahhala ye-pro. Akuwona umqondo omuhle ukuwela laba badobi. Izinhlobo eziqhekekile zingamema inkathazo engadingeki ngegciwane, i-malware, noma ngisho nezikhangiso ezivela eceleni. Ungazichaya engcupheni ye-intanethi.
Ngakho-ke, kufanele ulande i-Voicemod emthonjeni oyiqiniso, njengewebhusayithi esemthethweni. Uma ufuna ukujabulela uhlobo lwepro, ungabhalisela lapho. Bazokunikeza inombolo ye-serial. Uma othile ehlinzeka ngenombolo ye-serial yamahhala, futhi, yeka.
Inqobo nje uma ulandela le mihlahlandlela, i-Voicemod iphephe ngokuphelele futhi iyasebenziseka kalula. Siyethemba ukuthi lokhu kubuyekezwa kwe-Voicemod Pro kuzosusa noma yikuphi ukungabaza mayelana nepulatifomu.
Amakhodi we-Pokemon Go Promo (2020)
Ungayisetha kanjani i-Xbox usebenzisa ifoni?
I-emulator ye-Android yokulanda i-pc
bukela udonga olukhulu 123movies
ungawathola kanjani amakhodi bukhoma we-xbox 2015
amawebhusayithi wama-movie agcwele wamahhala awabhalisi
ibiza malini i-crunchyroll ngenyanga
Imidlalo engama-66 yamahhala esikoleni